गजुरेललाई पुर्व पत्नीले लागाइन ग-म्भीर आ*रोप; रिसले आगो भएर लाइभ आइन(भिडियो सहित) - Onlines Time
चर्चित हाँस्यकलाकार मनोज गजुरेलले पुनः विवाह गर्न लागेकोको समाचार अहिले सामाजिक संजालमा भाइरल नै बनेको छ । उनले एपी.वान. टेलिभिजनको तमसोमा ज्योतिर्गमय नामक कार्यक्रममा दिएको अन्तरवार्तामा गजुरेलले आफुले चाँडै नै विवाह गर्न लागेको जानकारी गराए । केही समयअघि श्रीमती मिना ढकालसँग गजुरेलको डिभोर्स भएको थियो । यद्यपि गजुरेलले कोसँग विवाह गर्न लागेको भनेर खुलाएका छैनन् ।
अन्तरवार्तामा उनले भनेका छन्, ‘चाँडै नै तपाईहरुको शुभकामना, सुझाव सल्लाहअनुसार मैले मेरो जीवनमा कोही साथी जोड्दैछु अथवा हामी जोडिदै छौं । अहिलेलाई मैले यति मात्र भनेँ ।’यसैबीच उनकी पुर्व श्रीमती मीना गजुरेलले सामाजिक संजाल टिकटक मार्फत लाइभ आएर आफ्ना पुर्व पति मनोज गजुरेलमाथी एउटा गम्भीर आ रोप लगाएकी छिन ।
उनले भनेकी छिन -” आखिर उनलाई के पुगेन? भात पकाएर दिने मान्छे पनि छन, सबै कुराहरू गर्ने मान्छे हुँदाहुँदैपनि से–“क्स नपुगेर अर्को विवाह गर्न लागेको, स्वास्नीविना बाच्न नसक्ने जस्ता गम्भीर आरोप लगाएकी छिन । यतिमात्र हैन उनले अरुपनि थुप्रै गम्भीर आ”” रोप लगाएकी छिन। पूरा भिडियो हेर्नुहोला ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको उज्यालो प्रदेश अभियानअन्तर्गत मुस्ताङका चार सय घरमा सोलार बत्ती जोडिएको छ । प्रदेश सरकारको ६८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ लागतमा सोलार जडान गरिएको हो । अभियानमा स्थानीयको २५ प्रतिशत आर्थिक योगदान पनि छ ।
बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–५ वडाको साङ्ता, लोमन्थाङको १, २, ३ र ४ वडाको छोसेर, अर्का, सम्जुङ, भर्चा, न्यानोल, ढुक, ठिगर फुवा, नाम्ग्याल किम्लिङ, न्याम्डो, चुङचुङ र लो–घेकर दामोदरकुण्ड गापाको ५ नम्बरस्थित ताङ्या र ध्ये गाउँका घरहरूमा सोलार बत्ती जडान गरिएको हो । २०७४ फागुन ४ को प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले दुई वर्षभित्र सबै घरमा विद्युत् सेवा पुर्‍याएर उज्यालो प्रदेश बनाउने निर्णय गरेको थियो । तत्काल केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुग्न नसक्ने ठाउँमा सोलार जडान गरिने भनिएको थियो । सोही अभियानअन्तर्गत मुस्ताङलगायत जिल्लामा काम थालिएको थियो ।
प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले हालै मुस्ताङलाई उज्यालो जिल्ला घोषणा गर्दै प्रदेशभर ११ सय ५ वटा सोलार बत्ती जडान भइरहेको बताए । यसका लागि मन्त्रालयले २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गोरखाको धार्चे र चुमनुब्री गापामा ४ सय ६०, म्याग्दीको धवलागिरि गापामा एक सय २० र मनाङको नार्पाभूमि गापामा एक सय २५ वटा सोलार जडान हुँदै छन् ।
घरमा सोलारको उज्यालो भएपछि मुस्ताङको बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–२ की सुनु गुरुङ खुसी भएकी छन् । सोही ठाउँकी ६६ वर्षीया फुङवा गुरुङले पनि मट्टितेलबाट उन्मुक्ति पाएको बताइन् । ‘टुकी बत्तीको उज्यालोबाट मुक्ति मिलेको छ । अँध्यारोबाट उज्यालोमा बस्न पाएका छौं,’ उनले भनिन् ।
लोमान्थाङ–२ का ३६ वर्षीय टासिलुटु गुरुङले गाउँमा बिजुली आएसँगै मान्छेको अनुहारमा उज्यालो छाएको बताए । उनले भने, ‘एउटा मोबाइल फुल चार्ज गर्न चार दिन लाग्थ्यो । बिग्रिएका गाडी, मोटरसाइकलको ब्याट्री ल्याएर चार्ज गथ्र्यौं । अब भने त्यो समस्या हटेको छ । अहिले एक घण्टामै मोबाइल चार्ज हुन्छ ।’ गण्डकी प्रदेश सांसद इन्द्रधारा विष्टले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन ल्याउने प्रयास पनि जारी रहेको र विद्युत् प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा सोलार जडान भएको बताए ।
Prevयो कामको लागि म जादैछु भाग्य न्यौपाने सगरमाथा सोलु सल्लेरी Bhagya Neupane Solukhumbu , Salleri
Nextबिहेभरी नाचेको नाचै, विदा भइन बेहुली ; खिर पुरी जस्तै भिडियो भाइरल गराइदिनुपरो भन्दै यसो भनिन(भिडियो सहित)